Dhacdooyin WorkSource Oregon
Xafiisyada WorkSource hadda waxay u furan yihiin in ballan laga qabsado keliya. Waxaad ballan qabsan kartaa adigoo la xiriiraya xafiiska WorkSource ee deegaankaaga. Shaqaale heegan ah ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8:30 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Shaqaalaha/xafiisyada WorkSource Oregon kaa caawin maayaan qaansheegashadaada shaqo-la'aanta. Wixii macluumaadka shaqo-la'aanta ah, booqo unemployment.oregon.gov.
Loogu Talagalay Dadka Shaqodoonka ah
Tixraaca Shaqooyinka Diyaarka ah
Shuruudaha Raadinta Shaqo
Macluumaadka Caymiska Shaqo-la'aanta
Loogu Talagalay Ganacsiyada
Su\_\_\_'aalaha Aalaaba La Isweydiiyo
WorkSource Oregon waxay bixisaa dhacdooyinka muuqaal araga tooska ah iyo kuwa shaqsi ah oo ka dhaca gobolka oo dhan . Hoos ka fiiri si aad u heshid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka soo socda ee WorkSource Oregon, oo dooro leenka khadka dhacdada ee aad danaynayso.
Ku Saabsan WorkSource
Si aad isugu diiwaangeliso wargelino ama si aad u gasho doorbidaadyadaada rukunte, fadlan geli qeybta hoose macluumaadkaaga xiriirka.
Worsource Oregon waa shaqo-bixiye/barnaamij loo wada siman yahay. Qalabka iyo adeegyada maqalka ee lacag la'aanta ah ayaa loo heli karaa shakhsiyaadka naafada ah, oo caawimaad luuqadeed oo lacag la'aan ah ayaa loo heli karaa dadka aqoontooda Ingiriisigu xaddidan tahay.
© 2022 Copyright Worksource Oregon | Siyaasadda asturnaanta